व्यायाम र खानपानले बढाउन सकिन्छ अक्सिजन « Aarthik Sanjal व्यायाम र खानपानले बढाउन सकिन्छ अक्सिजन – Aarthik Sanjal
२१ बैशाख २०७८, मंगलवार ०७:१६
श्वासप्रश्वास तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा। रक्षा पाण्डे सामान्य व्यायामले श्वासप्रश्वासलाई बढाउन सकिने बताउनुहुन्छ । “कोरोना प्रकोपले हजारौँ सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । सामान्य व्यायामले धेरैलाई श्वासप्रश्वासमा सहज बनाउन सक्छ”, उहाँको भनाइ छ । डा. पाण्डेका अनुसार घोप्टो परेर सुत्दा श्वासप्रश्वा ससम्बन्धी बिरामीलाई केही फाइदा पुग्छ । “यो पुरानो विधि हो । यसो गर्दा फोक्सोमा धेरै परिमाणमा अक्सिजन पुग्छ”, उहाँ थप्नुहुन्छ ।
अस्पतालमा समेत यस्तो विधि प्रयोग गरिएको डा.पाण्डेको भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, “बिरामीलाई अक्सिजन दिएर मात्रकहिले काहीँ पुग्दैन । त्यस्तो बेला हामी उहाँहरूलाई घोप्टो पार्छौं । यसो गर्दा फोक्सो फैलिन पाउँछ र श्वासप्रश्वासमा सजिलो हुन्छ ।”
उहाँका अनुसार फोक्सोको सबभन्दा गह्रौँ भाग हाम्रो पछिल्तिर हुन्छ । त्यसैले उत्तानो पारेर राख्दा बिरामीलाई पर्याप्त अक्सिजन तान्न कठिन हुन्छ भने घोप्टो पार्दा अक्सिजनको प्रवाह बढ्न गई फोक्सोका विभिन्न भाग सक्रिय हुन पाउँछ ।
यता कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत डा. अमितमान जोशीले वैज्ञानिक रूपमै पुष्टि भइसकेका श्वासप्रश्वास विधि घरमा आइसोलेसनमा बसेका सबैले अपनाउनु पर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “शरीरमा अक्सिजनको मात्रा ९४ भन्दा बढी हुनुपर्छ ।
अमेरिकन थो¥यासिक सोसाइटीले फेब्रुअरीमा चीनको वुहान जिन्यिन्तान अस्पतालमा रहेका १२ जना कोभिड–१९ का बिरामीमा गरेको अध्ययनमा घोप्टो पारिएका बिरामीको तुलनामा नपारिएका बिरामीमा फोक्सोको फैलिने क्षमता कम पाइएको जनाइएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट